Herisetra ara-nofo :: Vehivavy lehibe, 78 taona, naolana sy novonoina rehefa avy noratraratraina • AoRaha
Herisetra mampivarahontsana. Nindaosin’ny fahafatesana ny vehivavy lehibe iray, valo amby fito­polo taona, voalaza fa niharan’ny herisetra ara-nofo, tany Mahakary Ambatomainty, distrikan’ Amparafaravola, tamin’ny alarobia 25 septambra lasa teo. Naolana sy noratraratraina ary novonoina mihitsy ilay zokiolona, araka ny fitantaran’ny fianakaviany.
Tsy fantatra ary tsy nisy nahita ny olona nanao izao habibiana izao. Tsy mionona ny fianakaviana fa nitondra ny raharaha teny amin’ny Fam­panoavana hanaovana ny fanadihadiana sy ny fika­rohana rehetra.
Nipetra-drery tao amina trano lehibe iray mifefy tamboho, tany Mahakary Ambato­mainty, ity vehivavy lehibe niharam-boina ity. Tsy nisy nahita ny nahazo azy na ny olona mety ho niditra an-ke­riny sy ny zava-niseho tao an-tranony, tamin’ny alin’ny talata 24 septambra. Izy efa niantso vonjy no nanaitra ny olona.
«Tonga niantso vonjy tao amin’ny trano mifanila aminy, izay misy ny fianakaviana izy, tamin’ny marainan’ny alarobia 25 septambra. Niantsoantso izy niteny hoe ento any amin’ny dokotera aho fa marary. Efa tena reraka i bebe, tamin’io fotoana io. Feno ratra ny vatany. Nitanjaka ny vatany ambony», hoy ny zanak’ilay zokiolona namoy ny ainy.
Nikoropaka nitondra an’ilay vehivavy lehibe nankany amin’ny dokotera ny fianakaviana. Tsy tana ny ainy, fotoana vitsy taorian’ izay. «Naratra toy ny noka­pohina tamin’ny vato ny lohany. Nokendaina ihany koa izy ka nisy ratra teo amin’ny tendany. Sempotra tsy afaka niaina sy niteny izy», hoy ihany ny fianakaviana.
Tsy afaka nitantara ny zava-misy sy ny nahazo azy ilay renim-pianakaviana, talohan’ny nahafatesany, noho ireo ratra maro teny amin’ ny vatany ireo. «Taitra izahay, nandritra ny fampandroana ny razana fa simba ny taovam-pananahany. Nohamarinin’
ny mpitsabo fa voaolana i bebe», araka ny fanampim-panazavana.
Milaza ny fianakaviana fa misy olona ahiahian’izy ireo amin’izao herisetra narahina famonoana izao.
Ahiahiana fandehanana mafy :: Namono olona roa indray ny taksiborosy